Kusoo Dhowaada Qeybtii Sedexaad Ee Sheekadii Dalal Iyo Bilan Qiso Dhab Ah Sheeko Ku Celis Ah!! – Filimside.net
September 21, 2017 Ali Aadan
Warfaa Jaamac, kaftan ayaa leysku tuurtuuray, hase ahaatee Dalal waxaa la cuslaatay fekerna ku reebtay arrinkii ay soo jeedisay Bilan uuna u carrablaabay inay wada dhammeysan doonaan saddex casho kaddib, maxaa yeelay waxay markiisii hore ka ahayd xodxodasho iyo xaal dhallinyaro. Haddase mar hadday tiri, “Inaan reerkeygii ka talo baxo baan rabaa,” wax kale ma ahee hoy bey rabtaa. Wuxuuna uurka ka yiri, Bilan oo ooridaada noqota wax la heli karo ma ahe, markaas haddeyba raalli ka tahay ka hadal malehe tashigeeda gal.
Markii golihii la tegay isagiyo dhallintii la socotay oo geeli la maalay ayaa leysugu yimid ardaagii dabku ka shidnaa, waxaana hadalkii bilaabay Cali oo yiri, “Aniga Dalal baa iga yaabshay, waayo caawa oo dhan markaan ciyaareynay gabadhii wadaadka beeshu dhalay ayuu wax ku quraamaayey, kaalay miyaad ka duceysaneysay?”
“Kama duceysaneyne adigu ma xaasid baad tahay? Maxaad hadba kaaya isu soo dul taageysay, oo aannu kaaga haasaawi kari weynay?” buu Dalal ugu jawaabay.
Warfaa baa qaatoo yiri, “Waxaan tuhunsanahay in Dalal iyo gabarta Bilan arrin meel u yaale, maad Calow ka gaabsatid. War adna noo warran aan xaajada la soconnee.”
Dalal baa qaatoo yiri, “Horta nimanyahow idiin warramey, oo nin gabyaa ahaa oo la oran jirey Shankukibir baa beri hore jeclaaday haweenay la oran jirey Shacni Cali Ibraahim oo ka mid ahayd haweenkii Sayid Maxamed geesigii ka dhintay, Wuxuuna gabay ku yiri:
Nimanyahow an waan shuqulsanaa, waxaad shaxeyseene,
Qalbigay shareeraa, waxaad gabay shubeyseene.
Shaac baxay la moodyey Shacnaan galay shu’uunteede.
Waa midaanan sheekona ku maqal shaahidnow arage.
Waa shidho Ilaahey ka riday Shiikhii Waal dhalaye.
Ma shiddeyso oo socodku waa shaan u gooniya e.
Waa shaamareeraa ninkii shuufa laafyahaye.
Shubbad lacag ah, lawshado shushuba boqor shulla jooga.
Iga wallaanan shoob kale hareen shey rag leeyahaye.
Shanta haddaan ku dhigo, naago kale ima shiddeeyeene.
Yaa igu sharriba gacalo waa igu shisheysaaye.”
Dalal baa isagoo si wata hadalkii yiri, “Idiin ma sheegine, gabarta laga hadlaayo maalin dhoweyd ayaan nasiibsaday inaan la kulmo, iyadoo intey dharkii oo dhan iska dhigtay, oo garbasaar jilicsan keligeed guntatay oo haro xareed ah ku dabaalaneysa. Waxaadna maleyn kartaan sidaan daawashada jidhkeeda uga sugtay markaan u jirsaday masaafo yar oon xundhurteed si fiican uga arkaayey.”
Cali baa cirkaas ka qeyliyey oo yiri, “Waahiwaah! Waxasaa daawasho ah, war bal ku celi.”
Warfaa baa isna farta qaniinoo yiri, “Maxaad fashay?”
Dalal baa ku noqdoo yiri, “Waxaan falay ha dambeysee i daaya aan gabarta aan arkay idiinka warramee, yaab dartiis dhafooradaad gacmaha saari doontaane.”
“Horta intaanan quruxdeeda xubin xubin u sheegin, tilmaanta midabkeedu waa kaad aragteen, oo waa marriiri dhalaal casaan raac ah, weydna ma ahe inta hilibkeedu qorqoran yahay ayey dhex yar tahay, oo isku sar go’an tahay, xagga jooggeedana ma gaabna e, dherer dhexe ayey raacsan tahay. Intaas waxaan raaciyey quruxda gabartaas loo dhiibay markaan qiyaasay waxaa loo dhammeystiray soddon iyo labadii xubnood oo dumarka laga daawado, horena loo yiri haddii gabari leedahay ayse gabar tahay, guurkeeda sina looma daayo. Hadday naag nin leh tahayna raggii hore waxay yiraahdeen waa leysku dayaa in ninka qaba lagala baxo.
“Soddon iyo labadaas xubnood oy Bilan leedahay dumarna quruxdoodu ku dhan tahay, waa afar ay dhummuc u leedahay, oo waa labada kub iyo labada cududood; afar u dhaadheer tahay, waa labada gacmood, timaha iyo qoorta; afar ay u caddahay. waa labada indhood iyo ilkaha labadooda lakab; afar ay u madmadowdahay, waa labada indhood wiilkooda iyo labada suuniyood; afarey deeb u leedahay, waa labada debnood iyo labada mudane; afarey u yare shilis tahay, waa labada shidhir iyo labada takoorin soo raacooda wareegsan; laba ay u dhuudhuuban tahay, waa qoorta iyo dhexda; labo ay u shushuban tahay, waa labada dhaban; hal ay u buuxdo waa shafka oo ah meesha dumarku quruxda ka sitaan ishuna ku nasato; iyo hal ay u qoran tahay, waa sanka. Soddonkaas aragay ugu qurux badan tahay, labona maqalkooda ayaa dheguhu ku raaxeystaan, oo waa qosolkeeda iyo codkeeda macaan, markay erey tiraahdaba. Sheeko waxba tarimeysee, socodkeedu waa yaab aan hore loo arag, nin arkay
baa quruxdeeda maleyn kara, ee nin kale ma qiyaasi karo, ina rumeysta markaan is hortaagay laabteeda sidii muraayadeed baan isugu arkaayey, yaab iyo yaab!”
Halkaas markuu maraayo ayuu Dalal yare aamusay, oo u fiirsaday labadoodii, mise asigey fiirinayaan, oo dhafoorradey gacmaha ku wada hayaan, sidii ay muuqaalkeedii daawanayaan.
“Miyaanay waxaan arkay yaab iyo dhafoorro hays ahayn?” ayuu ku yiri.
Cali baa qaatoo yiri, “Waa dhafoorro heyse, ka soo qaad waadba guursatay, sow raggii hore may jideyn, adna kuma raacsanid mar haddey xubnahaas leedahay ninka guursada in laga qaado?”
Dalal waa is dhaafshay hadalkii Cali, hase ahaatee, Warfaa baa yiri, “Cali waxaan ku nacay waa doc ka yeer, war maa noo deysid cidna naag ka qaadimeyside, wax ma tarayahow, ha naloo sheekeeyee.”
“Taasi waa guubaabo,” baa Cali yiri.
Dalal baa qaato yiri, “Mar kastoo aan la hadlo, intey yare qososho ayey cod yare macaan, oo qalbiga taabanaaya, hadalkeeda ka bilowdaa, ‘Haa Dalal sidaas iyo sidaas,’ qoodhiin iyo xeradiin gabarta intaas oo tilmaamood oo badiba afarba, ama laboba iaku sifo tahay leh, miyaanay ahayn inuu ninkii arkaa anfaco diido, miyir beelo oo qalbigiisu jaceyl la wahmo? Su’aashii ahayd maxaad fashay; waxaan ka iri, waxii nin rag ahi isku dayi lahaa ayaan isku dayey, maadaama ay dagneyd, hase ahaatee wax guul ah kama gaarin, nabarkii aan idiinku iri geedaan ka soo dhacay buu igu gaareyna beentey bay ahayd, ee isku daygeedii ayuu igu muday.
Cali Maxuu Ku Jawaabay Kala Soco Qeybta Afaraad Iyo Jimcaha Dmabe.
Aqriso Qeybta Koowaad Riix Halkaan
Aqriso Qeybta Labaad Riix Halkaan
Intii loo sii socday golihii, Dalal iyo afartii kale dhallinyaro ay ka mid ahaayeen Cali Dalmar iyo